Vaovao - Tianjin Cheng Yang Vokatra mafana amin'ny lamba vita amin'ny vera vita amin'ny silikonika
Lamba landy dia antsoina koa hoe gel silica vita amin'ny lamba, gel silica aorian'ny hafanana be dia be vita amin'ny asidra sy alkali fanoherana, fanoherana ny abrasion, fanoherana ny hafanana avo sy ambany, ny fanoherana ny harafesin'ny anjara asa dia karazana fampiharana amin'ireo zavamaniry simika, fanatsarana menaka, seranan-tsambo ary fitaterana, fiara mandeha amin'ny fiara, otomotika, rano mafana indostrialy ary fantsom-pandehanana misitrika etona, sakafo ary indostria hafa, indrindra karazana karazan-tsigara avo lenta avo lenta ho toy ny akora mahazaka fihenan'ny fantsom-pandrefesana avo lenta avo lenta.
Ny fantsom-pamokarana silica gel tsy azo ovaina multilayer dia misy sosona vita amin'ny kofehy ao anaty, sosona manamafy ny kofehy ary sosona fingotra ivelany. Ny sosona ao anaty atiny dia sosona anatiny, ary ny sosona fingotra ivelany dia fonosina amin'ny sosona manamafy vy.
Ny fantsom-bary vita amin'ny lamba vita amin'ny silika dia manana tombony amin'ny androm-piainana lava sy ny tsindry lehibe. Izy io dia mahatanty ny tsindry 1MPa-10MPa, izay avo telo heny 3-5 heny noho ny fantsom-pitrandrahana tosidra avo lenta. Manana tombony miharihary amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izany.
Ny lamba silica gel dia vita amin'ny lamba vita amin'ny vera toy ny lamba ifotony amin'ny alàlan'ny fametahana na fanisan-doha. Izy io dia vita amin'ny hafanana avo lenta, anticorrosive ary lamba fibre fitaratra matanjaka be amin'ny alàlan'ny kalandrie vita amin'ny silika biolojika na manala zaza. Izy io dia vokatra ara-materialy mitambatra vaovao misy fahombiazana avo sy fampiasana USES.
1. Fanamafisana elektrika: ny lamba silika dia manana ambaratonga fanamafisam-peo avo lenta kokoa, mahazaka ny enta-mavesatra avo lenta, azo atao lamba lamba, tanany ary vokatra hafa.
2. Mpamatsy vola tsy metaly, lamba vita amin'ny silika ampiasaina ho fitaovana mampifandray amin'ny fantsom-pitaterana, fantsom-baravarankely vita amin'ny vatan'ny fonosana fonosana vita amin'ny vatan-tsolika toy ny akora fototra amin'ny fitomboana mitambatra. Izy io dia afaka mamaha ny hafanana mihetsiketsika mangatsiaka amin'ny famafana ny fantsona, lamba silika manana fanoherana avo amin'ny hafanana avo, anticorrosion, fanoherana ny fahanterana, elastika tsara ary malefaka, azo ampiasaina betsaka amin'ny solika, simika, simenitra, angovo ary sehatra hafa.
3. Anticorrosion: lamba vita amin'ny savony vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo dia azo ampiasaina ho toy ny sosona anticorrosion anatiny sy ivelany ho an'ny fantsom-panafody, miaraka amin'ny fahombiazan'ny anticorrosion sy tanjaka avo. Izy io dia fitaovana anticorrosion mety tsara.
4. Sahan-tany hafa: vita amin'ny silipo vita amin'ny kofehy vita amin'ny silipo vita amin'ny kofehy vita amin'ny horonam-peo azo ampiasaina amin'ny fananganana fitaovana famehezana, fehikibo conveyor anticorrosive hafanana avo lenta, fitaovana fonosana ary saha hafa.
Ny lamba silica gel koa dia nizara ho lamba silica gel iray sisiny ary lamba silica gel misy sisiny roa, ho fanampin'izany, misy lamba silika gel manasitrana mari-pana avo lenta ary lamba enti-manasitrana silika amin'ny efi-trano.
Ny loko mahazatra ny lamba silica gel dia vermilion, volondavenona manga, mainty, fotsy ary loko hafa koa azo namboarina.
Clot Fiberglass, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Fiberglass mifono akrilika,